ब्राजिल लाई रसिया बिश्वकप जिताउन सक्ने ब्राजिल का ५ महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरु – onlinekhelkhabar.com
ब्राजिल लाई रसिया बिश्वकप जिताउन सक्ने ब्राजिल का ५ महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरु
अनलाइन खेल खबर संवाददाता	Posted on जेष्ठ २३ २०७५, बुधबार
एजेन्सी ,अनलाईन खेलखबर || ब्राजिल राष्ट्रिय फुटबल टीमले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरु मा सहभागिता धेरै नै गर्दै आउने मध्यको एक टिम हो । फिफा विश्वकपको सबैभन्दा सफल यस टिमले पाँच पटक विश्वकप र चार पटक कन्फेडेरेसन कप समेत जित्न सफल भएको छ। जुन १४ देखि रसिया मा हुन लागेको फुटबल को महाकुम्भ मेला भनिने बिश्वकप मा पनि ब्राजिल उपाधी दाबेदार को रुपमा रहेको छ । पछिल्लो सन २००२ मा बिश्वकप को उपाधी उचालेको ब्राजिल यसपटक उपाधी आफ्नो पक्ष मा पार्न लालाहित देखिन्छ । सन २०१४ को बिश्वकप मा ब्राजिल ले सेमिफाइनल मा घरेलु मैदानमा जर्मनीसँग ७-१को पराजय हुन पुगेको छ । त्यसबेला पनि सदाझै ब्राजिल उपाधी को दाबेदार टिम मध्यको एक थियो ।
यसअर्थमा पनि ब्राजिल लाई रुस बिश्वकप निकै महत्त्वपूर्ण छ हालसम्म कै धेरै उपाधी जितेको टिम ब्राजिल यसपटक त्यो लय लाई आत्मसात गर्दै अघि बढन चाह्नन्छ । त्यसैले ब्राजिल ले यसपटक अनुभवी नाम चलेका युवा
खेलाडीहरुलाई विश्वकपको मैदानमा उतारदै छ । यी ५ खेलाडीहरु जसले रुस विश्वकपमा ब्राजिलको लागि नायकको भूमिका निर्बाह गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने छ्न ।
१. नेयमार : ब्राजिलियन प्रख्यात खेलाडी नेयमार पूरा नाम नेयमार डा सिल्भा संटोस जुनियर आफ्ना फुटबल टिमका खेलाडी तथा दर्शकदीर्घा माझ उनी नेयमारको नामले चिनिन्छन् । व्यावसायिक रुपमा हाल उनी स्पेनिस क्लब बार्सिलोना फुटबल क्लबबाट विश्व किर्तिमानी रकममा फ्रान्सेली क्लब पियसजीमा आबद्ध भएका छन्।र पियसजीमा खेल्दै छन् । उनि फुटबल खेल मैदानमा फरवार्ड, बिंगरबाट खेल्ने गर्छन । उनि ब्राजिल का लागि निकै महत्त्व राख्ने एकखेलाडि हुन ।
सन २०१४ मा ब्राजिलमा आयोजित विश्वकपमा नेयमारले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने आशा राखिएको थियो। उनले आफुले खेलका ५ खेलमा ४ गोल र १ असिस्ट प्रदान गरे तर कोलम्बियासँगको खेलमा ढाडमा चोट बोकेपछि उनले बाँकी खेल खेल्न सकेनन्। नेयमारबिनाको ब्राजिलले सेमिफाइनलमा घरेलु मैदानमा जर्मनीसँग ७-१को पराजय व्येहोर्यो।
यस्तै सन् २०१६मा रियो ओलम्पिकको फुटबलमा ब्राजिलले स्वर्ण पदक जितेको थियो। फुटबल जगतमा ब्राजिलले जित्न बाँकि रहेको एकमात्र पदकका रुपमा लिइएको यस उपाधि जिताउन नेयमारले उल्लेख्य भूमिका खेले। २०१४ को विश्वकपमा लज्जास्पद पराजय भोगेको जर्मनीलाई फाइनलमा पराजित गर्दै ब्राजिलले स्वर्ण पदक जित्यो
साथै उनी यो स्वर्ण विजेता टिमका कप्तान समेत रहेका थिए।
२. मार्सेलो : मार्सेलो विश्वकै उत्कृष्ट डिफेन्डरका रुपमा गनिन्छ्न । अहिले उनी निकै लय मा पनि देखिएका छ्न र यो लय रसिया बिश्वकप मा पनि देखिने पक्का छ । ब्राजिल का मुख्य खेलाडी को नाम लिदाँ मार्सेलो को पनि नाम आउँछ । रोर्वोटो कार्लाेसको उमनामले परिचित हुन् मार्सेलो ।
उनी ७० प्रतिशत भन्दा बढी समय सेन्टर लाइन भन्दा माथिनै बसेर फुटबल खेल्ने गर्दछ । मार्सेलो पनि ब्राजिललाई विश्वकप जिताउने नायक बन्ने सम्भावना निकै रहेको छ ।
३ कोन्टिनो : स्पेनिस क्लब बार्सिलोना बाट सफल व्यवसायीक फुटबल खेल्दै आएका कोन्टिनोले पनि ब्राजिलका लागि एक विशेष खेलाडी हुन , उनी एकदमै राम्रो लय मा नि देखिन्छ्न जसको निरन्तरता रसिया विश्वकप मा दिन चाह्न्छ्न ।
४. थियागो सिल्भा:बिश्वकै एक उत्कृष्ट डिफेन्डर का रुपमा कहलिएका सिल्भा ब्राजिलको मात्र नभएर विश्वकै उत्कृष्ट डिफेन्डर हुन् । उनी रुस विश्वकपमा क्याप्टेन को भुमिका मा समेत रहने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
५. बेकर : ईटालियन कल्ब रोमा बाट ब्याबसायिक फुटबल खेल्दै आएका बेकर ब्राजिल का पहिलो रोजाई का गोलकिपर हुन ।
बेकरले रुस विश्वकपमा ब्राजिलका लागि निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
Previous Postसमूह ” ए ” को बिजेता बन्दै आर्मी प्रधानमन्त्री कपको सेमिफाइनल प्रबेश : पुलिस पनि सेमिफाइनल मा
Next Postबिश्वकप मा ब्राजिलको प्रदंशन : हाल का सम्भावना र चुनौती ( एक बिश्लेषण )